Hoax Marketing? Takela-by Ivar's Undersea | Martech Zone
Hoax Marketing? Takelaka fisoratana anarana Ivar's Undersea
Alakamisy, Aprily 18, 2013 Alarobia, Aprily 17, 2013 Matthew Schmoldt
Araka ny Youtube, horonan-tsary 72 ora no ampakarina isa-minitra! Nisioka ny mpisera Twitter 400 heny an-tapitrisany isan'andro. Eto amin'ity tontolo feno tabataba ity dia sarotra ho an'ny vokatra, tranokala na serivisy ho re. Mbola mafy kokoa aza izany raha tsy misy zavatra miavaka amin'ny zavatra amidy. Isan'andro, ny mpivarotra dia miatrika fanamby hiakatra ambonin'ny tabataba. Manantena ny hampirisika ny mpamorona aho, hitodika any amin'ny 2009 sy ny hosoka fanaovana takelaka ambanin'ny tany nataon'Andriamnitra Rojo hazan-dranomasina Ivar any Seattle, Washington.
Ivar's dia natsangan'i Ivar Haglund, mpihira folk ao Seattle izay nanorina ny aquarium voalohany tao an-tanàna. Niorina ilay trano fisakafoanana satria nihevitra i Ivar fa fahendrena ny manome sakafo ireo mpitsidika ny hazan-dranomasina aquarium. Nomeny stark tsy mahazatra ny trano fisakafoanana misy azy, modely amin'ny iray amin'ny toerana misy azy aorian'ny trano fandraisam-bahiny Indiana. Nandritra ny am-polony taona maro, nanohana afomanga mahatalanjona teo an-toerana izy, izay nahasarika olona maherin'ny 300,000 isaky ny fahavaratra. Tao amin'ilay faritra dia somary nalaza angano i Ivar Haglund.
Ireo takelaka anaty rano
I Ivar dia nanomboka ny fampielezana takelaka anaty rano tamin'ny alàlan'ny fanambarana ny fahitana antontan-taratasy tamin'ny taona 1950 izay manome sarintany amin'ireo takelaby izay nilentika tao Puget Sound ny mpanorina ny trano fisakafoanana. Raha ny tokony ho izy, Haglund dia nieritreritra ny ho avy iray izay hitondran'ny mpanjifa ny sambo mpisitrika anaty rano manokana ary napetrany teo amin'ny Soundboard ny takelaka fanaovana dokambarotra mba hamaritana ny dokambarotra amin'ity demografika mitondra fiara anaty rano ity. Avy eo, nipoaka ny vaovao fa nahitan'ny tantsambo ny iray amin'ireo dokambarotra fanaovana takelaka tena izy avy any ambanin'ny Puget Sound. Ny takelaka vita amin'ny hazo izay azo dia nanao dokam-barotra ho an'ny 75 cents fotsiny ny lovia kely iray hazo ary noravahana loko sy barnakoraky ny toetr'andro. Tratra ihany koa ny takelaka fanaovana takelaka hafa.
Raha tsy ampy handresena lahatra ny sasany amin'ny maha-marina azy ireo ny takelaka takelaka, dia niroso tamin'ny fanamafisana ny zavatra hita ny iray amin'ireo mpahay tantara malaza ao amin'ny faritra Seattle. Paul Dorpat, mpahay tantara ao amin'ny fanjakan'ny Washington ary mpanoratra gazety fanta-daza ao an-tanàna, dia nanampy ny anarany tamin'io fifangaroana io tamin'ny fanomezana fanambarana manamafy fa tena izy ireo antontan-taratasy. Ny heviny natokisany, ampiarahina amin'ny fambolena am-pitandremana sy ny fahitana takelaka fanaovana hosoka amin'ny rano sandoka, dia ampy handresena lahatra ny besinimaro fa tena misy ireo takelaka. Ho fahatsiarovana ny nahitana azy dia nampidinin'i Ivar ny vidin'ny fihodinam-bolany ho 75 cents isaky ny vilia baolina - io vidiny io ihany aseho amin'ny doka.
I Ivar dia nikasa ny hitazona ny hosoka mandra-pahatapitry ny fampiroboroboana ny doka, saingy nanomboka nikatona ny kodiarana taorian'ny nahitan'ny fampielezan-kevitra ny fisian'ny famoahana trano fisakafoanana malaza. Rehefa nanontaniana momba ny tantara i Donegan dia nanaiky fa ny fahitana azy dia a fanentanana amin'ny marketing viral izay nanjary somary tsara lavitra noho ny nandrasana. Taorian'ity fanekena ity dia nanomboka nanameloka ny mpitantana ny orinasa Ivar ny sasany tamin'ireo vahoaka noho ny fambolena takelaka sy ny famitahana ny vahoaka. Paul Dorpat, mpahay tantara ao amin'ny fanjakana Washington dia nahazo hafanana ampahibemaso koa noho ny filalaovany niaraka tamin'ity farany ity.
Ny fiantraikan'ny fiakarana amin'ny tsipika farany ambany an'ny orinasa
Na eo aza ny fotoana fohy fampahalalana ratsy, nahomby ity fanentanana ara-barotra famoronana ity! Nandritra ny fampielezan-kevitry ny takelaka, nitombo ny varotra clam clam ao Ivar mihoatra ny 400 isan-jato, mitsambikina mihoatra ny 60,000 ny varotra raha oharina tamin'ny taona lasa. Araka ny porofoin'ity lahatsoratra ity, mahatadidy ity fampielezan-kevitra amin'ny famoronana marketing ity ny olona ary mbola miresaka momba izany ihany. Fikarohana Google ho an'ny Ireo takelaka takelaka Ivar's Undersea Hoax mamerina valiny maherin'ny 360,000.
Mazava ho azy fa drafitra sy famonoana be dia be no nanao izay hahatonga ny valin'ny takelaka ambanin'ny ranomasina Ivar ho fahombiazana. Ireto manaraka ireto dia fanalahidy lehibe hieritreretana anao ::
Nisy ny artifact ara-batana izay namela ny sary sy ny horonantsary nalaina tahaka ny nahitana ireo artifact ireo.
Ny tantara dia notohanan'ny mpahay tantara azo itokisana sy eo an-toerana.
Ny orinasa dia niomana sy nanararaotra tamin'ny fanaovana dokambarotra maimaimpoana tamin'ny alàlan'ny fandaniana vola amin'ny fanaovana dokambarotra ilay tantara adala sy ny vidin'ny fihenan'ny clam.
Ny tantara dia tsy fantatra fa azo inoana ary nahasarika ny sain'ny olona sy ny eritreriny izany.
Araka ny hitanao, ny ekipa tao Ivar's dia nihoatra ny mahazatra. Raha te hahomby ianao dia mila mazoto manao izay tsy eken'ny hafa. Mamorona zavatra avo lenta tsy misy dikany. Manamboara tantara iray mahatsikaiky sy azo inoana. Aza milamina amin'ny quo quo. Amin'ny marketing, tena miakatra ambony ny crème.
Tags: hosoka amin'ny takelakafanambakanamarketing amin'ny hosokaIvarshosoka amin'ny takelaka ivarachowder ivara
Matthew Schmoldt dia Internet Marketer nanomboka tamin'ny taona 2009. Izy no mpanorina ny ohthethingsyoucanbuy.com, toerana iray anaovany rima momba ny vokatra mahatalanjona.